Inqubomgomo Yemfihlo - Richardmille.to
Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza izinqubomgomo nezinqubo zethu ekuqoqweni, ukusetshenziswa kanye nokudalulwa kwemininingwane Yakho uma usebenzisa Insizakalo futhi ikutshela ngamalungelo akho obumfihlo nokuthi umthetho ukuvikela kanjani.
Sisebenzisa idatha yakho yomuntu siqu ukuhlinzeka nokwenza ngcono isevisi. Ngokusebenzisa i-Service, Uyavuma ukuqoqwa nokusetshenziswa kolwazi ngokuya ngale Nqubomgomo Yobumfihlo. Le Nqubomgomo Yobumfihlo idalwe ngosizo loMenzi Wenqubomgomo Yobumfihlo.
Amagama incwadi yokuqala ebhalwe ngofeleba anezincazelo ezichazwe ngaphansi kwezimo ezilandelayo. Lezi zincazelo ezilandelayo zizoba nencazelo efanayo kungakhathalekile ukuthi zivela kubunye noma kubuningi.
Ngenhloso yale Nqubomgomo Yobumfihlo:
-Akhawunti kusho i-akhawunti eyingqayizivele eyakhelwe Wena yokufinyelela insizakalo yethu noma izingxenye zensizakalo yethu.
Izwe kubhekiswa ku: Massachusetts, United States
Umhlinzeki Service kusho noma yimuphi umuntu wemvelo noma osemthethweni ocubungula imininingwane egameni leNkampani. Kusho izinkampani eziphuma eceleni noma abantu abaqashwe yiNkampani ukwenza lo msebenzi, ukuhlinzeka abantu egameni leNkampani, ukwenza imisebenzi ehlobene nensizakalo noma ukusiza iNkampani ekuhlaziyeni ukuthi isetshenziswa kanjani insizakalo.
Inkonzo Yezindaba Zenhlangano Yesithathu kubhekiswa kunoma iyiphi iwebhusayithi noma iyiphi iwebhusayithi yokuxhumana nabantu lapho uMsebenzisi angangena kuyo noma enze i-akhawunti ukusebenzisa i-Service.
Idatha yomuntu siqu yiluphi ulwazi oluhlobene nomuntu okhonjwa noma okhonjwa.
Amakhukhi ngamafayela amancane abekwe kwikhompyutha yakho, iselula noma enye into esetshenziswa yiwebhusayithi, equkethe imininingwane yomlando wakho wokuphequlula kuleyo webhusayithi phakathi kokusebenzisa okuningi.
Idatha yokusetshenziswa kubhekiswa kudatha eqoqwe ngokuzenzakalela, noma ekhiqizwa ukusetshenziswa kweSevisi noma kusuka kwingqalasizinda yeNkonzo uqobo (ngokwesibonelo, isikhathi sokuvakasha kwekhasi).
Ukuqoqa Nokusebenzisa Imininingwane Yakho Siqu
Ngenkathi sisebenzisa insizakalo yethu, singase sikucele ukuthi usinike imininingwane ethile ekhombisa ukusetjenziswa engasetjenziselwa ukuthinta noma ukukuhlonza. Imininingwane ekhonjwa umuntu ingafaka, kepha ayikhawulelwe ku-:
Igama lokuqala negama lokugcina
Ikheli, Isizwe, Isifundazwe, i-ZIP / ikhodi yeposi, idolobha
Idatha Yokusebenzisa iqoqwa ngokuzenzakalelayo lapho kusetshenziswa Isevisi.
Idatha Yokusebenzisa ingafaka imininingwane efana nekheli le-Inthanethi Yedivayisi Yakho (isb. Ikheli le-IP), uhlobo lwesiphequluli, inguqulo yesiphequluli, amakhasi Esevisi yethu Oyivakashelayo, isikhathi nosuku lokuvakasha Kwakho, isikhathi esichithwe kulawo makhasi, idivayisi ehlukile okokuhlonza nenye idatha yokuxilonga.
Lapho ufinyelela Insizakalo usebenzisa noma usebenzisa iselula, Singaqoqa imininingwane ethile ngokuzenzakalela, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, uhlobo lwensiza yakho ephathekayo oyisebenzisayo, i-ID yakho eyingqayizivele, ikheli le-IP ledivayisi yakho yeselula, iselula yakho uhlelo lokusebenza, uhlobo lwesiphequluli se-Intanethi olusebenzisayo, izikhombi zedivayisi ezihlukile neminye imininingwane yokuxilonga.
Singahle futhi siqoqe imininingwane isiphequluli sakho esithumela noma kunini lapho uvakashela Insizakalo yethu noma lapho ufinyelela Insizakalo ngedivayisi yeselula.
Ukulandelela Technologies namakhukhi
Sisebenzisa amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo bokulandela umkhondo ukulandelela umsebenzi ku-Service yethu futhi sigcine imininingwane ethile. Ubuchwepheshe bokulandelela obusetshenzisiwe bubeacons, amathegi nemibhalo yokuqoqa nokulandela imininingwane nokwenza ngcono kanye nokuhlaziya insizakalo yethu.
Ungayala isiphequluli sakho ukuba senqabe wonke amakhukhi noma sikhombise lapho kuthunyelwa i-Cookie. Kodwa-ke, uma ungawemukeli ama-Cookies, kungenzeka ungakwazi ukusebenzisa ezinye izingxenye zensizakalo yethu.
Amakhukhi angaba amakhukhi “Aqhubekayo” noma “Amaseshini”. Ama-cookies aqhubekayo ahlala kwikhompyutha yakho noma kudivayisi yakho ephathekayo lapho ungena kokungaxhunyiwe ku-inthanethi, ngenkathi i-Session Cookies isuswa ngokushesha nje lapho uvala isiphequluli sakho sewebhu. Funda kabanzi ngamakhukhi: Konke Mayelana Namakhukhi.
Sisebenzisa womabili amakhukhi wesikhathi namakhukhi aphikelelayo ngezinhloso ezibekwe ngezansi:
Amakhukhi adingekayo / abalulekileThayipha: Amakhukhi Eseshini Aphethwe yi: Us Injongo: Lawa makhukhi abalulekile ukukunikeza ngezinsizakalo ezitholakala ngeWebhusayithi nokukunika amandla okusebenzisa ezinye zezici zawo. Basiza ukugunyaza abasebenzisi futhi bavimbele ukusetshenziswa kwenkohliso kwama-akhawunti womsebenzisi. Ngaphandle kwalawa makhukhi, amasevisi owacelile awakwazi ukunikezwa, futhi sisebenzisa lawa makhukhi ukukunikeza lezo zinsizakalo.
Izinqubomgomo Zamakhukhi / Amakhukhi Wokwamukelwa kwesazisoThayipha: Amakhukhi Aqhubekayo: Aphethwe yi: Us Injongo: Lawa makhukhi akhomba ukuthi ngabe abasebenzisi bakwamukele ukusetshenziswa kwamakhukhi kuwebhusayithi.
Ukusebenza amakhukhiThayipha: Amakhukhi Aqhubekayo: Aphethwe yi: Us Injongo: Lawa makhukhi asivumela ukuba sikhumbule izinqumo ozenzayo lapho usebenzisa i-Website, njengokukhumbula imininingwane yakho yokungena noma okuthandayo ngolimi. Inhloso yalawa makhukhi ukukunikeza okuhlangenwe nakho komuntu siqu nokukugwema ukuthi uphinde ufake okuthandayo njalo lapho usebenzisa iWebhusayithi.
Ukuthola eminye imininingwane ngamakhukhi esiwasebenzisayo nezinketho zakho maqondana namakhukhi, sicela uvakashele Inqubomgomo yethu yamaKhukhi noma isigaba samaKhukhi senqubomgomo yethu yobumfihlo.
Ukusetshenziswa Kwemininingwane Yakho Siqu
Inkampani ingasebenzisa idatha yomuntu siqu ngezinhloso ezilandelayo:
Ukuhlinzeka nokugcina isevisi yethu, okubandakanya ukuqapha ukusetshenziswa kweNsizakalo yethu.
Ukuphatha i-Akhawunti yakho: ukuphatha ukubhaliswa kwakho njengomsebenzisi wesevisi. Imininingwane Yakho Oyinikezayo ingakunika ukufinyelela kokusebenza okuhlukile kwensiza kutholakala kuwe njengomsebenzisi obhalisiwe.
Ukuze kwenziwe isivumelwano: ukuthuthukiswa, ukuthobela kanye nokwenza inkontileka yokuthengwa kwemikhiqizo, izinto noma izinsizakalo Ozithengile noma yisiphi esinye isivumelwano nathi ngeNsizakalo.
Ukuxhumana Nawe: Ukuxhumana nawe nge-imeyili, izingcingo, i-SMS, noma ezinye izindlela ezilinganayo zokuxhumana ngogesi, njengezaziso zohlelo lokusebenza lweselula eziphathelene nokuvuselelwa noma ukuxhumana okufundisayo okuhlobene nokusebenza, imikhiqizo noma izinsizakalo ezinenkontileka, kufaka phakathi izibuyekezo zokuphepha, lapho kudingeka noma kufanele ukwenza kwabo.
Ukukunikeza ngezindaba, okunikezwayo okukhethekile nolwazi olujwayelekile mayelana nezinye izimpahla, izinsiza kanye nemicimbi esikunikezayo efana naleyo osuvele uyithengile noma ubuzile ngayo ngaphandle kokuthi ukhethe ukungatholi lolo lwazi.
Ukuphatha Izicelo zakho: Ukuhambela nokuphatha izicelo zakho Kithi.
Singabelana ngolwazi lakho lomuntu siqu kulezi zimo ezilandelayo:
Nabahlinzeki Bezinsizakalo: Singabelana ngolwazi lwakho lomuntu siqu nabahlinzeki Bezinsizakalo ukubheka futhi sihlaziye ukusetshenziswa kweNkonzo yethu, ukuxhumana nawe.
Okokudluliselwa kwebhizinisi: Singabelana noma sidlulisele imininingwane Yakho yangasese maqondana, noma ngesikhathi sokuxoxisana, noma yikuphi ukuhlangana, ukuthengiswa kwempahla yeNkampani, ukuxhaswa ngezimali, noma ukutholwa kwako konke noma ingxenye yebhizinisi lethu kwenye inkampani.
Nabalingani: Singahlanganyela imininingwane Yakho nabasebenzisana nathi, lapho sizofuna khona labo abaxhumene nathi ukuhlonipha Le Nqubomgomo Yobumfihlo. Abaxhumana nabo bafaka inkampani yethu yabazali kanye nanoma yiziphi ezinye izinkampani ezingaphansi, ababambisene nabo ngokuhlanganyela noma ezinye izinkampani esizilawulayo noma ezingaphansi kolawulo olufanayo nathi.
Nabalingani bebhizinisi: Singahlanganyela imininingwane Yakho nabalingani Bethu bebhizinisi ukukunikeza imikhiqizo ethile, izinsizakalo noma ukukhuphula.
Nabanye abasebenzisi: lapho Wabelana ngolwazi lomuntu siqu noma uxhumana nezinye izindawo zomphakathi nabanye abasebenzisi, lolo lwazi lungahle lubhekwe yibo bonke abasebenzisi futhi lungasatshalaliswa esidlangalaleni ngaphandle. Uma uxhumana nabanye abasebenzisi noma ubhalisa nge-third-Party Social Media Service, Oxhumana nabo ku-third-Party Social Media Service bangabona igama lakho, iphrofayili, izithombe kanye nencazelo yomsebenzi wakho. Ngokufanayo, abanye abasebenzisi bazokwazi ukubuka izincazelo zomsebenzi wakho, baxhumane Nawe futhi babuke iphrofayili yakho.
Ukugcinwa Kwemininingwane Yakho Siqu
Inkampani izogcina Imininingwane Yakho Siqu kuphela uma kunesidingo ngezinhloso ezibekwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo. Sizogcina futhi sisebenzise i-Datha Yakho Siqu kuze kufike lapho kudingeka khona ukuhambisana nezibopho zethu zomthetho (ngokwesibonelo, uma kudingeka ukuthi sigcine idatha yakho ukuze ihambisane nemithetho esebenzayo), sixazulule izingxabano, futhi sisebenzise izivumelwano nezinqubomgomo zethu zomthetho.
Inkampani izophinda igcine ukusetshenziswa kwedatha ngezinhloso zokuhlaziywa kwangaphakathi. Idatha yokusetshenziswa ngokuvamile igcinwa isikhathi esifushane, ngaphandle kokuthi le datha isetshenziselwa ukuqinisa ukuphepha noma ukuthuthukisa ukusebenza kwensizakalo yethu, noma sibophezelwe ngokomthetho ukugcina le datha isikhathi eside.
Ukudluliswa Kwemininingwane Yakho Siqu
Imininingwane yakho, kufaka neDatha Yomuntu, icutshungulwa emahhovisi okusebenza weNkampani nakwezinye izindawo lapho izinhlaka ezithintekayo ekusebenzeni zikhona. Kusho ukuthi lolu lwazi lungadluliselwa - futhi ligcinwe kuma - computer atholakala ngaphandle kwezwe Lakho, isifundazwe, izwe noma omunye umthetho kahulumeni lapho imithetho yokuvikelwa kwedatha ingahluka kunaleyo evela kumandla Wakho.
Imvume yakho yale Nqubomgomo Yobumfihlo elandelwa ukuhanjiswa Kwakho kwalolo lwazi imele isivumelwano sakho kulokhu kudluliswa.
Inkampani izothatha zonke izinyathelo ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi idatha Yakho iphathwa ngokuphephile futhi ngokuhambisana nale Nqubomgomo Yobumfihlo futhi akukho kudluliswa kweDatha Yakho Yoqobo eyokwenzeka enhlanganweni noma ezweni ngaphandle kokuthi kube nokulawula okwanele okukhona kubandakanya ukuphepha kwe Idatha yakho neminye imininingwane yakho.
Ukudalulwa Kwemininingwane Yakho Siqu
Uma iNkampani ibamba iqhaza ekuhlanganeni, ekutholeni noma ekuthengisweni kwempahla, imininingwane Yakho ingadluliselwa. Sizonikeza inothisi ngaphambi kokuthi Idatha Yakho Yoqobo idluliswe futhi iba ngaphansi kwenqubomgomo Yobumfihlo ehlukile.
Ngaphansi kwezimo ezithile, iNkampani ingacelwa ukuthi idalule imininingwane Yakho uma idingeka ukwenza lokho ngomthetho noma ukuphendula izicelo ezivumelekile zeziphathimandla zikahulumeni (isib. Inkantolo noma i-ejensi kahulumeni).
Ezinye izidingo zomthetho
Inkampani ingadalula i-Datha Yakho uqobo ngokholo oluqinisekile lokuthi isenzo esinjalo siyadingeka:
Qondana nesibopho esingokomthetho
Vikela futhi uvikele amalungelo noma impahla yenkampani
Vimba noma uphenye okungalungile okungenzeka okuhlobene nesevisi
Vikela ukuphepha komuntu siqu kwaBasebenzisi beNkonzo noma komphakathi
Vikela ezikweletini ezisemthethweni
Ukuphepha kweMininingwane Yakho
Ukuphepha kweDatha Yakho Komuntu kubalulekile kithi, kodwa khumbula ukuthi ayikho indlela yokudlulisela nge-Intanethi, noma indlela yokugcina nge-elekhthronikhi evikelekile eyi-100%. Ngenkathi Silwela ukusebenzisa izindlela ezamukelekayo kwezentengiso ukuvikela Idatha Yakho, Asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kwayo ngokuphelele.
Amalungelo akho wobumfihlo e-California (California Shine the Light law)
Ngaphansi kweCalifornia Civil Code Isigaba 1798 (AbaseCalifornia Shine the Light law), izakhamizi zaseCalifornia ezinobudlelwano bebhizinisi obusungulwe nathi zingacela imininingwane kanye ngonyaka mayelana nokwabelana ngeDatha yabo yomuntu siqu nabantu besithathu ngezinjongo zokumaketha eziqondile zabantu besithathu.
Uma ungathanda ukucela imininingwane ethe xaxa ngaphansi komthetho weCalifornia Shine the Light, futhi uma ungumhlali waseCalifornia, Ungaxhumana Nathi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe ngezansi.
Amalungelo Obumfihlo aseCalifornia Abasebenzisi Abancane (Ikhodi Yebhizinisi LaseCalifornia Nobuchwepheshe Isigaba 22581)
Isigaba 22581 seCalifornia Business and Professions Code sivumela izakhamizi zaseCalifornia ezingaphansi kweminyaka engu-18 ezingabasebenzisi ababhalisiwe bezingosi eziku-inthanethi, izinsizakalo noma izinhlelo zokusebenza ukucela nokuthola ukususwa kokuqukethwe noma ulwazi abaluthumele esidlangalaleni.
Ukucela ukususwa kwedatha enjalo, futhi uma ungumhlali waseCalifornia, Ungaxhumana Nathi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe ngezansi, bese ufaka ikheli le-imeyili elihlobene ne-Akhawunti Yakho.
Yazi ukuthi isicelo sakho asiqinisekisi ukususwa okuphelele noma okuphelele kokuqukethwe noma imininingwane ethunyelwe ku-inthanethi nokuthi umthetho awukwazi ukuvumela noma ufune ukususwa ezimweni ezithile.
Isevisi yethu ingaqukatha izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi angasetshenziswanga yithi. Uma Uchofoza kusixhumanisi somuntu wesithathu, Uzoqondiswa kusayithi lalo muntu wesithathu. Sikukwazisa ngokuqinile ukuthi ubuyekeze Inqubomgomo Yemfihlo yawo wonke amasayithi owavakashelayo.
Singavuselela inqubomgomo yethu yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Sizokwazisa nganoma yiluphi ushintsho ngokuthumela inqubomgomo entsha Yobumfihlo kuleli khasi.
Sizokwazisa nge-imeyili kanye / noma ngesaziso esivelele ku-Service Yethu, ngaphambi kokuthi ushintsho lusebenze futhi sibuyekeze usuku oluthi "Lugcine ukubuyekezwa" phezulu kwale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Uma unemibuzo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, Ungaxhumana nathi: